प्रदेशमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको रणनीति : सके एक्लै बहुमत पुर्‍याउने, नसके प्रतिपक्ष गुहार्ने !
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ राजनीतिप्रदेशमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको रणनीति : सके एक्लै बहुमत पुर्‍याउने, नसके प्रतिपक्ष गुहार्ने !
विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश १ सरकारलाई पनि हल्लाएको छ । दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शेरधन राईविरुद्ध सत्तारुढ नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका ३७ सांसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
२०७४ साल फागुन ३ गतेबाट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेका छन् । उनलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन कठिन छ ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफूसँग ४७ सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर आइतबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ३७ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा नेकपाको ६७ सदस्यमध्ये २० सदस्य नेकपा ओली समूहमा खुलेका छन् । तर पार्टी विभाजनले वैधानिकता नपाएका कारण यो सङ्ख्या तल–माथि हुनसक्छ ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपनि अझै एक महिना उनलाई आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने समय छ । आइतबार नै प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले ७ माघका लागि अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन गाह्रो !
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पत्रकार सम्मेलन गरी भने ‘सुनियोजित रूपमा आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसको सामना आरामले गर्छु ।’
मुख्यमन्त्री राईले आरामले सामना गर्छु भनिरहँदा उनलाई सहज छैन । प्रदेशमा रहेका ९३ सांसद्मध्ये नेकपा ओली समूहमा २० जना सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन नेपाली काङ्ग्रेससँग छलफल गरिरहेका छन् । तर काङ्ग्रेसको समर्थनले मात्र उनको सत्ता टिक्दैन । प्रचण्ड– नेपाल पक्षका थप ७ जना सांसद्लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्छ । जुन तत्काल सम्भव छैन । तर मुख्यमन्त्रीका लागि एक महिनाको समय भएकाले सांसद्लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने सकेसम्म पहल गर्नेछन् ।
तीन सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनका लागि मुख्यमन्त्रीले पहल गरिरहेका छन् । तर सो पार्टीले सरकारमा जाने–नजाने धारण बनाइसकेको छैन । ‘पहिला उनीहरूको सङ्ख्या क्लियर होस् त्यसपछि छलफल गर्छाैं ।’ जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादव भन्छन्, ‘सरकार बनाउनका लागि अझै केही समय छ ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पनि सहज छैन
प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको प्रचण्ड– नेपाल समूहलाई पनि सहज भने छैन । प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर ढुक्क हुने अवस्था नरहेका कारण प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन खोज्ने सम्भावना छ ।
१–२ जना सांसद् तलमाथि भए जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने छ । अर्काे विकल्पको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गर्न सकिने एक सांसद्ले बताए । ‘सकेसम्म आफैँ सकार बनाउछौँ,’ एक सांसद्ले भने, ‘एक महिना पछिको परिस्थिति कस्तो रहन्छ । अवस्था हेरेर प्रतिपक्षसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छौँ ।’
नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्की काङ्ग्रेसका कारण सरकार बन्न नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । आवश्यक परे काङ्ग्रेस सरकारमा जाने बताउँदै उनले ठूलो दललाई सरकार बनाउने छुट रहेको बताए ।
‘नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो । हाम्रो कारण सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने ‘काङ्ग्रेसले सरकारविहीनताको अवस्था रहन दिँदैन ।’